Fiara-mientana ho fampandrosoana an'i Bongolava - Madagascar Informations
13 juin 2018 Madagascar Informations Aucun commentaire
Hanatanteraka Loa-bary an-dasy hentina hakana hevitra ifotony momba ireo olana sy vahaolana izay tena manahirana ny mponina ny Fikambanan ZANAK’i BONGOLAVA ny 30 jona hoavy izao.
Ny fandriam-pahalemana, Fomba fitantanana, ny toe-karena sy fiharin-karena ary ny tanora sy ny fampandroasoana no ifatohan’ny dinika.
Marihana fa ny Fikambanan’ny Mpianatra, Mpiasa, Mpandraharaha, Vato nasodrotry ny tany avy amin’ny Faritra Bongolava (Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe ) no mivondrona ao amin’ity fikambanana Zanak’i Bongolava ity.
Ny hevitra azo amin’ny hetsika dia harafitra ho drafitr’asa araka ny laharam-pahamehana entina hanampiana ny mpitondra isa’ambaratonga izay hifandimby eo amin’ny Faritra.
Ny Fikambanana moa dia vonona hatrany hanome tanana sy hifanampy amin’ny fanatanterahana ny drafit’asa . Manasa ny zanak’i Bongolava rehetra arak’izany ny fikambanana mba ho tonga hantrika ny hetsika. Ny teny filamatra dia “MIARA MIENTANA HO FAMPANDROSOANA AN’I BONGOLAVA”
← Les membres du nouveau Gouvernement nommés
Vinavina ny mety ho rotsakorana: →
Session inaugurale de la Plateforme Économique Africaine
20 mars 2017 Madagascar Informations 0
28 février 2017 Madagascar Informations 0